सिंगापुर वार्ता सकारात्मक : ट्रम्प – Rajdhani Daily
सिंगापुर वार्ता सकारात्मक : ट्रम्प
सिंगापुर / एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको बहुप्रतिक्षित शिखर वार्ता सम्पन्न भएको छ । दुई नेताहरूबीच अनुवादक मात्र राखेर सिंगापुरको सेनटोसास्थित होटल कापेलोमा एक्लाएक्लै गरिएको सो वार्ता निकै सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जानकारी दिए ।
वार्तापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘वार्तामा एकदम राम्रो प्रगति भएको छ, यस वार्ताले हामीलाई एकदम सफलता दिनेछ ।’ मंगलबार बिहानको छोटो वार्तापछि संवाददातालाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले वार्तामा निकै धेरै प्रगति भएको छ र यसले आफूहरूलाई भोलिका लागि पनि सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको उल्लेख गरे ।
वार्तामा प्रवेश गर्नुअघि पनि उनले पत्रकारसँग गरेको कुराकानीका आफू आशावादी रहेको बताएका थिए । त्यस समयमा संक्षिप्त कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किमसँग अहिलेसम्म नभएको सम्बन्धको विकास हुने बताएका थिए । वार्ताका लागि होटलमा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले होटलबाहिरै हात मिलाएका थिए । हात मिलाएपछि विश्वका सञ्चारमाध्यमले अमेरिकाको बहालवाला राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेताबीच पहिलोपटक ऐतिहासिक भेट भएको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रचार गरेका थिए ।
वार्तामा बस्नुअघि उत्तर कोरियाली नेताले भनेका थिए, ‘यस वार्ताका लागि सिंगापुरसम्म आइपुग्न सजिलो थिएन, कैयौं अप्ठ्यारा थिए, तर हामी आयौं ।’ सिंगापुरको पर्यटकीय टापु सेनटोसास्थित कापेलो होटलमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमले एक अर्कासँग हात मिलाएर मुस्कुराएका थिए ।
उनीहरूले हात मिलाउने स्थानमा अमेरिका र उत्तर कोरियाको झन्डा राखिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकाको झन्डा भएतिर र नेता किम उत्तर कोरियाको झन्डा भएको स्थानमा पुगेर हात मिलाएका थिए । त्यसपछि सोही स्थानमा उभिएका आ–आफ्ना अनुवादकको सहयोगमा केही शब्द आदानप्रदान गरेर एक्लाएक्लै वार्ताका लागि होटलको वार्ता कक्षमा प्रवेश गरेका थिए ।
उनीहरू वार्ता कक्षमा प्रवेश गर्दासम्म नै टेलिभिजन र अखबारका क्यामेराले पछ्याइ नै रहेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेताबीच हुने भनिएको यस वार्ताको यस महŒवपूर्ण घटनाका लागि विश्वका सञ्चारमाध्यमले निकै पहिल्यैदेखि नै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थिए । यो क्षणलाई आफ्नो सञ्चारमाध्यममा प्रसारण गर्न विश्वका सयौं पत्रकार सिंगापुर पुगेका थिए ।
ट्रम्पलाई कडा प्रश्न
एक पत्रकारले ट्रम्पलाई उत्तर कोरियासँगको वार्ता सफल हुन्छ भनेर कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधे । जसको उत्तरमा ट्रम्पले सुनिश्चित त केही पनि गर्न नसकिने जवाफ दिए । उनले उत्तर कोरियामा कुनै पनि युद्ध भएमा त्यसबाट लाखौं दक्षिण कोरियालीको पनि ज्यान जाने टिप्पणी गरे ।
यस्तै, अर्का पत्रकारले उत्तर कोरियालाई किन नष्ट गर्ने धम्की दिनुहुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्न गरे । त्यसको जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘त्यो समयका हिसाबले सोही भाषामा जवाफ दिनु ठीक थियो ।’ यस्तै दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले गर्दै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास अन्त्यका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘हामी लामो समयदेखि दक्षिण कोरियासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएका छौं । हामी यसलाई युद्धको खेल भन्छौं । यसमा धेरै खर्च थियो । दक्षिण कोरिया पनि खर्च गर्दथ्यो । तर, शतप्रतिशत होइन । हामीले बराबरीको कुरा ग¥यौं । सैन्य अभ्यास धेरै महँगो हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘दक्षिण कोरियासँगको सैन्य अभ्यासले उत्तर कोरियालाई भड्काउँथ्यो । हामी धेरै जटिल सम्झौताको कुरा गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ कि युद्धको खेल जारी राख्नु उचित हुँदैन ।’
निशस्त्रीकरणमा प्रतिबद्ध छौं : किम
यसैबीच उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सिंगापुरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको शिखर वार्ताको क्रममा कोरियाली प्रायद्वीपलाई पूर्णनिशस्त्रीकरण गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उत्तर कोरियाली नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको सो सम्झौतामा कोरियाली प्रायःद्वीपमा नै पूर्णनिशस्त्रीकरण गर्ने सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई नेताले सिंगापुरमा भएको वार्तापछि एक संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अमेरिकाले उत्तरकोरियाको पूर्ण प्रमाणीकरण गर्न सकिने र उल्टाउन नसकिने प्रकृतिको परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि जोड दिँदै आएको थियो ।
ह्वाइटहाउसमा फेरि भेट्छौं : ट्रम्प
यसै वार्ताबाट प्रभावित भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेतालाई फेरि भेट्ने बचन दिएका छन् । सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नेता किमलाई ह्वाइटहाउसमा भेट्ने वचन दिएका हुन् । दुई नेताबीच भएको पहिलो भेटघाटबाट अत्यन्त प्रसन्न भएका ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेतासँग बारम्बार भेट गर्ने पनि बताए ।